Inona ny tantara an-tantara?
Performing Arts Manao
Tantara Theatre dia fampisehoana an-tsehatra tantara iray na maromaro nambaran'ny vondrona mpilalao sarimihetsika izay manao anjara asa maro sy manome fitantarana. Mampiavaka ny fampiasana "toerana" tsotra toy ny seza sy latabatra mandamina soso-kevitra samihafa, tranokely tsotra toy ny kitapo na tavoahangy karokaroka ampiasaina amin'ny fomba samihafa amin'ny tantarany mihoatra ny iray, ary ny endrika akanjo toy ny kitapo, solomaso, na satroka. Matetika koa ny mozika dia tafiditra ao amin'ny fampisehoana Story Theater.
Tamin'ny taona 1960, lehilahy iray nantsoina hoe Paul Sills dia niara-niasa tamin'ireo mpilalao sarimihetsika ary nampiasa ny teknolojian'ny teatra novolavolan'ny reny, Viola Spolin (Improvisation for the Theatre), mba hampisehoana tantara maromaro an'i Fairy Tales Grimm sy Aesop. Mr. Sills dia nanadihady ny asany ary nanoratra azy io ho toy ny sarimihetsika antsoina hoe, Story Story. (Mba hamakiana ny famaritana amin'ny antsipiriany momba an'io play, tsindrio eto.)
Ity lalao ity, izay manana Broadway mihazakazaka tamin'ny taona 1970-1971, dia ohatra iray tena tsara amin'ny famoronana, mora entina mamokatra ary karazana teatran'ny teatra. Ity ny fomba ahafantarana (ary mety hanova ny tantara efa misy) Story Theatre:
Ao amin'ny teatra, fivoriambe dia fampiharana ekena eo amin'ireo olona manao tantara an-tsehatra. Ireto manaraka ireto dia teknika na fivoriambe maromaro ampiasaina ao amin'ny Story Theatre.
Tetikasa tsotra ampiasaina amin'ny fomba fijery maro
Matetika dia fitaovana tsotra vitsivitsy monja. Ireo dingana ireo dia azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa amin'ny tantara mihoatra ny iray.
Ny tapa-bolana lehibe, ohatra, dia mety ho sarin'ny tantara iray, ny tapany amin'ny manaraka, ny renirano iray amin'ny manaraka, ary ny bibilava iray amin'ny manaraka. Ohatra hafa momba ny fitaovana entin'ny mpanakanto manova ny fomba fiasan'izy ireo sy ny fihetsik'izy ireo: hazo dôlely, dobo mirenireny, "kitay", kitapo, planchina, tady, vilia, ary baolina.
Ny famaranana dia azo apetraka amin'ny mpandahateny, ny tarika, ny tarika madinika, na ny filokana manontolo. Ny fampihetseham-peo dia milalao ampahany betsaka amin'ny famoahana tantara an-tsehatra, saingy tsy misy ny mpanamarina voatondro. Mifanohitra amin'izany kosa, ireo tarehimarika dia mitantara ny zavatra ataon'izy ireo ary miresaka ny fifanakalozan-dry zareo.
Azonao atao, ohatra, ilay mpilalao sarimihetsika Goldilocks izay manana ity tsipika ity:
"Avy eo i Goldilocks dia nanandrana ilay kafe tao anaty vilia lehibe indrindra. Mafana loatra ity papango ity! "
Mpilalao sarimihetsika iray no afaka manao anjara andraikitra maro. Ny vehivavy dia afaka milalao ny lahy, ary ny lehilahy dia afaka mitendry vehivavy. Mpilalao sarimihetsika dia mety hilalao biby. Ny fanovana tsotra amin'ny feo, ny fihetsika, ny fihetsiketsehana ary ny filalaovana baolina dia mampiseho ny mpihaino hoe mpilalao sarimihetsika izay nilalao, ohatra, ny Farmer amin'ny tantara iray dia ny Princess ao anatin'ny tantara vaovao.
Fampisehoana tantara "Story Theater" dia tsotra: boaty hazo, seza, seza, latabatra, na fitarihana. Nandritra ny fampisehoana dia navotsotra haingana ireo singa ireo mba hampisehoana ireo toe-javatra maromaro samihafa. Raha miambina ny mpijery dia mamerina manamboatra ireo sombin-dahatsoratra ireo: ny lamasinina, ny lava-bato, ny havoana, ny sambo, ny soavaly, ny tetezana, ny seza, sns.
Ny akanjo fototra sy ny fomba amam-panao dia tsy amin'ny ankapobeny. Ireo mpilalao dia manondro ny fiovan'ny toetr'olona amin'ny fampidirana ampahany sarobidy toy ny satroka, kapa, akanjo, akanjo, perla, orona sy solomaso, fonon-tanana, akanjo, akanjo, akanjo, satroboninahitra, akanjo.
Mampiasa sarimihetsika matetika ireo mpanakanto mba hampihetsi-po ireo tantara-na dia hita maso aza ilay tetik'ady. Ohatra, ny mpihira iray dia mety hitazona saribakoly iray raha toa ka misy mpihira iray hafa, ankoatra izay, manindry ny tena karavasy na mampihomehy feo mba hamokarana ny feo.
Ny fanoratana dia mamoaka feo manjelanjelatra amin'ny fomba fijery ny mpihaino, mampiasa ny vavany na ny tanany, na ny fitaovana toy ny ampongabendanitra, ny sifotra, ny ampongatapaka ary ny hazo. Manangana feo toy ny:
Ny koveta, ny kotrokorana, ny tselatra, ny orana, ny rivotra, ny alina, ny crickets, ny varavarana fisakafoanana, ny soavaly iray mitaingin-tsoavaly sy ny fingotra, ny onja oseana, ny molekiola, ny mandondòna varavarana, ny vavan-drakitra, na rivotra mahery.
Izany endrika teatra izany matetika dia mitaky fampisehoana mahery sy manintontsintona. Ny orinasan-tserasera rehetra dia matetika no mijanona manerana ny fampisehoana, milalao andraikitra, mihira hira, mihetsika, manamboatra feo, ary manao fihetsiketsehana amin'ny zava-misy ao amin'ny tantara mihetsiketsika rehefa mitranga izy ireo.
Noho ireo endritsoratra maromaro ao anatin'ny tantara an-tsarimihetsika, ny famoahana tantara an'ny The Theater dia afaka manangona antoko lehibe na mpilalao sarimihetsika kely, izay, araka ny voalazan'ny voalohandohany, dia manana andraikitra maro. Ny mpampianatry ny mpampianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny efitrano fianarana dia afaka mampiasa ny fivoriambe ao The Story Teo amin'ny fomba hananana ireo mpianatra hanova ny lahatsoratra izay vakiny ao amin'ny dramatizations.
Mba hijery ampahany amin'ny Story Theater Production, tsindrio eto.
Mba hitsidihana tranonkala iray natokana ho an'ny asan'i Paul Sills sy Viola Spolin, tsindrio eto.
Ahoana no hialana amin'ny fanaraha-maso
Ahoana no fomba hahazoana famelabelarana raha tsy misy mpanome talenta
Soso-kevitra ho amin'ny fanoherana ny Callback
Fihetseham-po diso fanantenana izay tsy azonao atao
Fampisehoana mivelatra, nitohy
Torohevitra sy toro-hevitra ho an'ny fizarana fiaramanidina tsara kokoa
Zava-bita eo amin'ny kintana: Jennifer Levinson sy Steven Kanter
Ireo sehatra ho an'ny zatovovavy ao amin'ny "The Children's Hour"
Ny Afrikana-Amerikana Timeline: 1880 hatramin'ny 1889
Artículos prohibidos para trabajar un Estados Unidos
Profile of Michael Skakel - Fizarana voalohany
Nahoana ianao no tokony hitafy kiraro kiraro?
Ahoana no hanombohana club after school?
Inona ny PAT amin'ny baolina kitra?
Fikarohana ireo razambe tao amin'ny fanisam-bahoaka britanika
Medaly volamena mpilalao baolina kitra - Kilalao rehetra
Famaritana ny atao hoe Capillary Action and Examples
TokyoPop Manga Mpamorona (Software) Review
Manintona ny zavakanto - Manomboka amin'ny abstraction
Ny ambaran'i Tzedakah amin'ny Jodaisma
Ny Tantara sy ny Hoavin'i Phobos, Mars Avaratra
Famaritana sy ohatra amin'ny ankapobeny amin'ny chimie
Japoney Folk Tales & Mukashi Banashi
Manot Cave - Ireo Olom-bitsy maoderina taloha avy any Afrika sy ao amin'ny Levant
Art Glossary: ​​Sary hosodoko
Monolahy vehivavy avy amin'ny "Ahoana no hahaizana ankizivavy"
Tongasoa eto amin'ity lahatsoratra ity
Tokony ho vakiana raha toa ianao ka 'Walden'